Baker McKenzie (Gaikokuho Edibeneyo Yeshishini) sele ezinikezelwe exceptional isemthethweni ngeenkonzo kubathengi bethu zokusebenza kwi — Japan kwaye internationally kuba ezine decades, kwaye enye oldest, ukususela ivula yayo doors njengoko i-enxulumene-ofisi Baker McKenzie ngowe.
Umthetho Ifemi ke Isixhosa Davis Polk sesinye ihlabathi ke, inkulumbuso umthetho firms. Ezaziwayo kuba zethu skillful umsebenzi highly complex imicimbi asele kakhulu kubathengi bethu, siya kunikela amanqanaba aphezulu ukugqwesha kwaye breadth kuwo onke zethu iindlela ezilungileyo kwaye specialties. Wethu, abaxhasi, abaninzi kubo ishishini kwaye yehlabathi iinkokeli. Umthetho Ifemi ke Isixhosa K L Amasango LLP limele ezikhokelela yehlabathi amakhulu, ukukhula koqoqosho eliphakathi-kwimakethi iinkampani, ikomkhulu kwiimarike abathabatha inxaxheba entrepreneurs kwi-wonke enkulu ishishini iqela ngokunjalo necandelo likarhulumente karhulumente, namaziko emfundo, philanthropic organizations kwaye abantu.
DLA Piper waba lelinye oyena isemthethweni inkonzo bamatyala ehlabathini kwi- nge-ukudibana ka-unprecedented ekhaya kwi-isemthethweni kwicandelo lezolimo. Xa inkulu kuzo umlinganiselo, ukudibana isicwangciso-buchule waba elula — ukwenza i-ngamazwe isemthethweni senzo capable ka-ethabatha nokukhathalelwa ibaluleke kakhulu isemthethweni iimfuno zabantu.
Boutique umthetho ifemi ebekwe kwi-Tokyo
Senzo sijongana jikelele corporate, imisebenzi kunye imbambano isisombululo. Thina injongo ukubonelela phezulu isemthethweni ingcebiso kwi Isijapanese nemithetho kakhulu effecient hlobo. Hughes Hubbard Reed LLP limele zoshishino ezingama-ranging ukusuka ngasese-igcine iinkampani ukuba enkulu, esidlangalaleni-traded ngamazwe amakhulu. Ifemi ke ama abaqondisi-mthetho lokucebisa abaxhasi kwi abarhwebayo eyenziweyo, kuquka mergers kwaye acquisitions, financings kwaye edibeneyo kakhulu kwamaxabiso izivumelwano zokwakha uluhlu, ezigunyazisiweyo zengxelo. I-Dreves Langaphandle Umthetho-Ofisi ibonelela high-umgangatho isemthethweni ingcebiso ngesingesi kwaye Isijapanese ukuba Isijapanese kwaye langaphandle amakhulu, umthetho firms kwaye abantu malunga domestic, umnqamlezo-umda kwaye iinqwelo-mthetho ezinye ezigunyazisiweyo zengxelo imicimbi. Ifemi maintains ephezulu ethical imigangatho. Umnu Building ukusuka yayo kweelwimi-ifumana imali kwaye securitization iindlela ezilungileyo, Atsumi Sakai siqulunqe ubunzulu iinkalo zobuchule ukuba ivakalisa kuwo yonke imihlaba ishishini kwaye iimali umthetho. Ifemi sele lunxulumano ukugqwesha kuba yayo innovative izakhono kwi-ezemali, ingakumbi kuba umsebenzi wethu kule projekthi. Satsuki Umthetho Ifemi sele kuphethwe iimeko kuba non-Isijapanese abaxhasi kuba ngaphezu amabini eminyaka. Ingakumbi thina ingaba uqinisekile kwi-ngamazwe wokuqhawula umtshato, umntwana custody, umntwana abduction, immigration amatyala. Sathi kanjalo ukukhombisa u-mthetho iimeko, traffic kunokwenzeka ingozi compensations, kwaye abasebenzi kunokwenzeka ingozi imbuyekezo, kuba. AIHARA Umthetho-Ofisi (ALO), Tokyo, Ejapan yi boutique ifemi emasimini ngamazwe urhwebo kumazwe angaphandle kwaye investments.
I-Ofisi encomekayo yi-Pr
Ugq Takashi AIHARA, Lamagqwetha e Umthetho ebhalisiweyo kwi-Japan. Eyona senzo kwiindawo ALO kuba langaphandle abaxhasi zezi. Isemthethweni ingcebiso kwi-phantsi Isijapanese. Upawulos, Hastings, Janofsky Walker LLP ufumana i-global umthetho ifemi kunye ishumi elinesibhozo kwi-ofisi enkulu ishishini centers kuwo e-Asia, i-Europe, ne-USA Zethu ugqaliso yindlela elula: Ukubonelela lwesivumelwano ukugqwesha kuyo yonke into senza. Ngowe namhlanje ke kwezoqoqosho-bume kubaluleke ngakumbi kunokuba ngonaphakade ukusebenza nge ifemi lonto